Konya Karaman Hızlı Tren Sinyalizasyon İşi 2020'de Tamamlanacak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး42 KonyaKonya Karaman မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအချက်ပြခြင်းလုပ်ငန်းကို 2020 တွင်ပြီးဆုံးမည်
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, 70 Karaman, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အမြန်ရထားနှင့်အတူမိနစ်အကြား konya karaman
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး M. Cahit Turhan၊ Konya၊ Karaman နှင့် Kayseri တို့သည်ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများ Mersin ဆိပ်ကမ်းသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပြီး Konya-Karaman-Mersin-Adana HT စီမံကိန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလွှဲပြောင်းပေးရန်စီစဉ်ထားပြီးဒေသတွင်းခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုမည်ဟုသူကပြောသည်။
လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးသွားသော 423 ကီလိုမီတာ 102 ကီလိုမီတာအရှည်ကီလိုမီတာ Konya-Karaman အပိုင်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်ဘူတာရုံအစီအစဉ်များကို Turhan ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီလိုင်းမှာ 2020'da အချက်ပြလုပ်ငန်းကိုပြီးစီးသွားမှာပါ။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ Konya-Karaman လိုင်းပေါ်ရှိခရီးသွားချိန်ကို 200 နာရီမှ 1 မိနစ်အထိ 13 မိနစ်သို့လျှော့ချလိမ့်မည်။ ”
Konya-Karaman လိုင်း 245 ကီလိုမီတာကီရာမန် - နီဂde (Ulukışla) -Mersin (Yenice) ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် Karaman-Ulukışlaအပိုင်းတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း Turhan ကပြောကြားသည်မှာစီမံကိန်းသည် 2022 တွင်ပြီးစီးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Turhan၊ 110 ကီလိုမီတာစီမံကိန်းUlukışla-Yenice အပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ 4'inci နှင့် 3'inci လိုင်းတည်ဆောက်မှုကို အခြေခံ၍ Adana-Mersin လိုင်းရှိ4လိုင်းရှိတည်ဆောက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုပြီးစီးသွားပြီဟုသူကထပ်ပြောသည်။ ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Turhan ကပြောကြားရာတွင်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရန်တင်ဒါပြင်ဆင်မှုသည်လက်ရှိရထားလမ်းကို constructionukurova လေဆိပ်နှင့်ဆက်သွယ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Konya-Karaman နှစ်ချက်လိုင်းအမြန်နှုန်းရထားလမ်းလေ့လာရေးမေလတစ်လတွင်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည် 06 / 04 / 2015 မေလတွင် Konya-Karaman မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကိုပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည်။ Karaman-Konya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလမ်းဖောက်လုပ်မှုများသည်အဆုံးသို့ရောက်လုနီးပြီ။ Konaman-Karaman ရထားလမ်း Karaman ၏အုပ်ချုပ်မှုကရေးသားထားသောကြေငြာချက်တွင်…
Karaman-Konya-Karaman ၏ YHT နှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည့်ပေါင်းစပ်ခရီးသည်အကြားခရီးသွားလာသမရိုးကျမီးရထားခရီးသည်အတွက် operated တူရကီ-Konya-တူရကီလိုင်းများအတွက်ဘတ်စ်ကားငှားရမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 14 / 07 / 2015 သမားရိုးကျရထားများ၏ခရီးသည်များသည် Ankara-Konya-Ankara လိုင်းပေါ်တွင်လည်ပတ်နေပြီး YHT- ချိတ်ဆက်ထားသောခရီးသည်များ၏တွဲဖက်ခရီးသည်များသည် Karaman-Konya-Karaman အကြားဘတ်စ်ကားငှားရမ်းခြင်းအားဖြင့် Karaman-Konya-Karaman အကြားခရီးသွားလာကြလိမ့်မည်။ တူရကီနိုင်ငံမီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှ -
AK ပါတီ Karaman လက်ထောက် Elvan: Karaman-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းစျေးပြိုင်ဒီဇင်ဘာလ၌သွားရောက်ရန် 18 / 11 / 2012 AK ပါတီလက်ထောက် Elvan Karaman: "Karaman-Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းတင်ဒါကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်" AK ပါတီမှလက်ထောက်အမတ်Lütfi Elvan ကဒီဇင်ဘာလတွင် Karaman နှင့် Konya အကြားပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းအသစ်အားတင်ဒါတင်ဒါခေါ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Gayrettepe အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်က Metro လိုင်း 2020 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်! 04 / 04 / 2019 တူရကီရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်လေဆိပ် Turhan ဝန်ကြီးက Metro လိုင်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဆောက်လုပ်ရေး Gayrettepe-အစ္စတန်ဘူလ်၏ကြာချိန်များအတွက်ဧရာမလေယာဉ်ကွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစတင်။ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ယနေ့ညတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ more ...
Konya-Karaman, နောက်ဆုံးပြည်နယ်အတွက် Karaman-Eregli YHT လိုင်း 14 / 10 / 2016 Konya-Karaman, Karaman-Eregli YHT လိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပြည်နယ်: TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın၊ 'Konya-Karaman၊ Karaman-Eregli၊ Adana-Mersin နှင့် Gaziantep တို့သည်အချို့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတောင်ပိုင်းသို့စတင်ရောက်ရှိမည်၊
Karaman-Konya-Karaman ၏ YHT နှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည့်ပေါင်းစပ်ခရီးသည်အကြားခရီးသွားလာသမရိုးကျမီးရထားခရီးသည်အတွက် operated တူရကီ-Konya-တူရကီလိုင်းများအတွက်ဘတ်စ်ကားငှားရမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
AK ပါတီ Karaman လက်ထောက် Elvan: Karaman-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းစျေးပြိုင်ဒီဇင်ဘာလ၌သွားရောက်ရန်
Gayrettepe အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်က Metro လိုင်း 2020 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်!
Konya-Karaman, နောက်ဆုံးပြည်နယ်အတွက် Karaman-Eregli YHT လိုင်း
Kütahya - Alayunt - Afyon - Konya - Karaman - Ulukışlaလျှပ်စစ်ဓာတ်အား, signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေး Facility စီမံကိန်း 2013 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရရန် SPO ရည်ညွှန်းခဲ့သည်
Konya - Karaman -2။ လိုင်း signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ်ကြိုတင်အလုပ်စတင်ခဲ့သည်
Konya - Karaman -2။ ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အလုပ်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်း signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်
Konya - Karaman - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အလုပ်Ulukışla2လိုင်း signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍစီမံကိန်းပြီးစီးဇာတ်စင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,
Konya - Karaman - Ulukışla2လိုင်း signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပစ္စည်းဌာနနှင့်သမ္မတထံသို့စေလွှတ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (328) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)